कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘गुण्डा’ उम्मेदवारको ‘बिगबिगी’ : ज्यान मुद्दामा जेल बस्नेदेखि क्यासिनो किङसम्म ! | Diyopost - ओझेलको खबर कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘गुण्डा’ उम्मेदवारको ‘बिगबिगी’ : ज्यान मुद्दामा जेल बस्नेदेखि क्यासिनो किङसम्म ! | Diyopost - ओझेलको खबर
कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘गुण्डा’ उम्मेदवारको ‘बिगबिगी’ : ज्यान मुद्दामा जेल बस्नेदेखि क्यासिनो किङसम्म !
दियो पोस्ट शनिबार, मंसिर ०४, २०७८ | १९:५१:१०
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले डन र राजनीतिबीच खतरनाक ‘नेक्सस’ अर्थात गठजोड रहेको बताउँदै आएका थिए । एउटा समय यस्तो थियो की नेताहरुले गुण्डा नाइकेलाई संरक्षण गर्थे । त्यस्ता नेता विवादित बन्थे र समाचारको माध्यम बन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ । गुण्डा नाइकेहरु खुलमखुल्ला राजनीतिको केन्द्रमा देखिन थालेका छन् । गुण्डा नाइके दीपक मनाङ गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री नै बनेका छन् । काभ्रेका गुण्डा नाइके गणेश लामा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा उम्मेदवार थिए । तर, उनी पराजित भए ।
नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशनमा गुण्डा नाइकेहरुले धमाधम उम्मेदवारी दिएका छन् । गुण्डाहरु धेरै उम्मेदवार बन्नेमा काभ्रे र धादिङ अग्रस्थानमा देखिएका छन् ।
क्यासिनो गुण्डागर्दीबाट राजनीतिमा अवतरण हुँदै बले
बलराम सापकोटा उर्फ ‘बले’ गुण्डागर्दीको ट्रयाक रेकर्डमा ‘ए’ लेभलका गुण्डा नाइके हुन् । काठमाडौंलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दीमा लागेका उनी प्रहरीद्वारा पटक पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । उनी क्यासिनो क्षेत्रमा क्रियाशिल गुण्डा हुन् । गुण्डागर्दी गरेरै उनले होटल मेची क्राउन खोलेका छन् । उनै बले नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशनमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट केन्द्र महाधिवेशन प्रतिनिधि (खस आर्य) तर्फका उम्मेदवार बनेका छन् ।
राधेको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने रहर !
धादिङका गुण्डा नाइके राधाकृष्ण भण्डारी उर्फ राधे पनि आसन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका छन् । उनले धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले कांग्रेसको स्लोगान ‘हामी भित्र ‘म’ सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने काँग्रेस’ राखेर ब्रोसर बनाएका छन् । धादिङ र काठमाडौंलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दीमा समलग्न राधे कुनै समय दिनेश अधिकारी ‘चरी’ समुहमा थिए । तर, पछि उनीहरुको दोस्ती दुश्मनीमा परिणत भएको थियो । राधेले नै चरीलाई राजधानीमै गोली प्रहार गरेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा राधे पक्राउ परेका थिए । तर, राजनीतिक दबावमा छुटेका उनी लामो समयदेखि धादिङमै क्रियाशिल थिए । धादिङमा उनी गिटी बालुवाको ठेकेदारी मार्फत गुण्डागर्दीमा समलग्न छन् । उनलाई अन्य राजनीतिक दलका नेताको समेत संरक्षण रहेको चर्चा छ । केहीवर्ष अघि मात्रै राधेले जिल्ला सदरमुकाम धादिङमा नै आयुप तामाङमाथि सांघातिक आक्रमण गराएका थिए । उनी विरुद्ध जाहेरी नै दर्ता भएपनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
गुण्डा नाइके अशोक तामाङको पनि उम्मेदवारी !
धादिङको उत्तरी क्षेत्र अर्थात दार्खा देखि रुवीभ्यालीसम्म अशोक तामाङको गुण्डागर्दी छ । उनी विभिन्न हत्याकाण्ड र अपराधको अभियोगमा जेल बस्दै छुट्दै आएका छन् ।
उनको गुण्डागर्दीबाट उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा आतंकित छन् । उनै अशोक यतिबेला आसन्न कांग्रेस अधिवेशनमा प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनेका छन् । धादिङ क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश ‘ख’को सभापतिको उम्मेदवार बनेका उनले ‘समग्र देश विकासमा हामी युवा’ भन्दै नारा प्रचार गरेका छन् ।
शनिबार, मंसिर ०४, २०७८ | १९:५१:१०